ကားအမည်ပြောင်းအတွက် ဝင်ငွေခွန် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ - Myanmar Automobile and Equipment Directory
ကားအမည်ပြောင်းအတွက် ဝင်ငွေခွန် ဘာတွေ သိထားသင့်သလဲ
ဝင်ငွေ ရပေါက်ရလမ်း အတွက် အခွန်ဆောင်ထားတဲ့ အထောက်အထား အပြည့်အစုံ မရှိရင် ကားအမည်ပြောင်းဖို့ ရာဖြတ်နှုန်းထားအရ ဝင်ငွေကို ရာဖြတ်တန်ဖိုးရဲ့ ၃ % ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၃ % သတ်မှတ်ချက်ဟာ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ကုန်ဆုံးတဲ့ စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက် အထိသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက်ထက် နောက်မကျ ဘဏ်မှာ ချလံဖြင့် ငွေသွင်းပြီးသား ဖြစ်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် အခွန်မပေးဆောင်ဖြစ်ရင် အောက်တိုဘာလက စပြီး ၃ % အစား ၆ % နှုန်းထားအသစ် သတ်မှတ်ချက်ဖြင့် ပေးဆောင်ရမှာမို့ ၂ ဆ ပေးဆောင်ရမယ့်သဘော ဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်ဆောင်ထားပြီးရင် ကညနမှာ ချက်ချင်း အမည်မပြောင်းဘဲ နေလို့ရပါသလား။ ရပါတယ်။ ကားလိုင်စင် သက်တမ်းကုန်လို့ သက်တမ်းတိုးတော့မှ အမည်ပြောင်းကိုပါ တစ်ပါတည်း လုပ်ကိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဒီတော့ အမည်ပြောင်းရဖို့ ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အခုစက်တင်ဘာလမှာ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အခွန်ရုံးကို သွားပြီး ဝင်ငွေခွန် ၃ % ပေးဆောင်ထားခြင်းဖြင့် ၆ % ပေးဆောင်ရခြင်းမှ လွတ်ကင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခွန်ဆောင်ပြီးရင် ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေ ပြန်ရမလဲ။
အခွန်စိမ်း ၂ ရွက်
ဝင-၈ စာရွက်အဖြူ ၁ ရွက်
ဘဏ်ချလန်မူရင်း ၁ ရွက်
အားလုံး. ၄ရွက် ပြန်ရပါတယ်။ ဝင-၈ စာရွက်အဖြူ ၁ ရွက် မရခဲ့ရင် တောင်းပါ။
အခွန်ဆောင်ဖို့ ဘာစာရွက်စာတမ်းတွေ ယူသွားဖို့ လိုမလဲ
၁။ မော်တော်ယဉ် မှတ်ပုံတင်စာအုပ် ကမ (၃) (အုံနာဘုတ်) မူရင်း၊မိတ္တူ
၂။ ယာဉ်မှတ်ပုံတင်သက်သေခံလက်မှတ် မူရင်း၊မိတ္တူ
၃။ အမည်ပြောင်းသူ၏မှတ်ပုံတင် မူရင်း၊မိတ္တူ
၄။ အမည်ပြောင်းသူ၏ သန်းခေါင်စာရင်း မူရင်း၊မိတ္တူ
၅။ ယာဉ်၏ ရှေ့၊ နောက်၊ မောင်းသူဘက်ဘေးတိုက် ဓါတ်ပုံ မူရင်း၊မိတ္တူ
၇။ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြပါက ဝင်ငွေရလမ်း အထောက်အထား မူရင်း၊မိတ္တူ
၈ ။ Showroom ကားဖြစ်လျှင် ကားနှင့် ပတ်သက်သော အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ၊ အရောင်းပြေစာ မူရင်းမိတ္တူ
၉။ ကိုယ်စားလုပ်ကိုင်သည်ဆိုပါက အမည်ပေါက်ထံမှ ကိုယ်စားလှယ် လွှဲစာ
အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ တန်ဘိုးက ရာဖြတ်ဈေးထက် ပိုမများသင့်ပါ။ များနေရင် များနေတဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်း ၃ % ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
>>> 2019-2020အတွက် ရာဖြတ်တန်ဖိုးကြည့်ရှုရန် နှိပ်ပါ <<
ယာဉ်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်တွင် အုံနာဘုတ်ထဲမှ အမည်နှင့် ယခုအမည်ပြောင်းမည့်သူ အမည် တို့ဖြင့် တိုက်ရိုက် စာချုပ်ပြန်ချုပ်ထားရပါမယ်။ အဆင့်ဆင့် လက်ပြောင်းထားတဲ့ စာချုပ်တွေနဲ့ လုပ်လို့ မရပါ။ နမူနာအဖြစ် ဘုရင့်နောင်မှာ တည်ရှိတဲ့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အတွက် အခွန်ရုံးမှာ လုပ်ဆောင်ပုံကို အကျဉ်းအားဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
အခွန်ဆောင်ဖို့အတွက် ဖောင်တင်ရမှာ ဖြစ်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ဖောင်တွေကို အခမဲ့ ပေးပါတယ်။ ဖောင် ၄ ရွက် ပေးတာမှာ ကိုယ်တိုင် လာလုပ်တာဆိုရင် ၃ ရွက် ဖြည့်ရပြီး ကိုယ်စားလာလုပ်ပေးတာဆိုရင် ၄ ရွက် ဖြည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ယူလာတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေနဲ့ ဖောင်တွေနဲ့အတူ တင်ရပါမယ်။
အခွန်ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြရန် လျောက်လွှာအတွက်လိုက်နာရမည့် အချက်များ
(၁)။ တင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် အတူ လျောက်လွှာပေါ်တွင် ရေးသွင်းရမည့် အချက်အလက်များအားမှန်ကန် ပြည့်စုံစွာရေးသားဖော်ပြရန်နှင့် ထုတ်ယူသည့်ချလံများအား ( QR) ဖြင့်သေချာစွာစစ်ဆေးရယူကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
(၂)။ မှားယွင်းချက်များ ရေးသွင်းထားခြင်း ၊ ဖတ်ရူရန် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ မထင်မရှားရေးသွင်းထား၍ ချလံနှင့်မော်တော်ယာဥ◌်ပုံစံတွင် မှားယွင်းမှုရှိပါက ထပ်မံ၍ လျောက်လွှာတင်သွင်းရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။ ဖောင်တင်တဲ့နေရာမှာ စာရွက်အတွဲကို ထည့်ဖို့ ခြင်းထဲ ထည့်ပြီး ထပ်ထားလိုက်ပါ။ အလှည့်ကျရင် နာမည်ခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ရာဖြတ်တန်ဖိုး ဘယ်လောက်လဲဆိုတာ စာရေးမက ပြောပြပြီး ဘဏ်မှာ ငွေသွင်းဖို့ ချလံစာရွက်ပေးပါတယ်။
စီးပွားရေးဘဏ်မှာ ငွေသွားသွင်းပါ။ ဘဏ်တွေမှာ အဝင်ဝမှာ အမည်စာရင်းပေးရတယ်။ ဖုန်းနံပါတ်ပါ ပေးရတယ်။ ပေးပြီးရင် စောင့်နေလိုက်ပါ။ နာမည်ခေါ်ရင် ဝင်လို့ ရပြီ။ ဘဏ်ထဲဝင်ပြီး ငွေပေးသွင်းပါ။ ဘဏ်က ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ ချလန်စာရွက်ကို မိတ္တူ အနည်းဆုံး ၂ ကော်ပီ ကူးပါ။ ရုံးချိန်မီသေးတယ်ဆိုရင် အခွန်ရုံးကို ပြန်သွားပြီး ချလံမိတ္တူတစ်ရွက် ပေးလိုက်ပါ။ အချိန်မမီတော့ရင် နောက်တစ်နေ့မှ သွားပေးပါ။
နောက်တစ်နေ့ကို ရက်ချိန်းပေးပါလိမ့်မယ်။ ရက်ချိန်းမှာ အခွန်ရုံးကို တစ်ခေါက်ပြန်သွားတဲ့အခါ ချလံမိတ္တူကို တင်ပြပြီး အခွန်စိမ်း ၂ ရွက်နဲ့ ဝင-၈. ထုတ်ယူပါ။ လက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ထိုးပါ။ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ အချက်အလက်တွေ မှန်ကန်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။ ပွဲစားမလိုပါ။ အပိုကြေးလည်း တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မပေးရပါ။
အပိုစကားလည်း ပြောရခြင်း မရှိပါ. ကိုယ့်ဖက်မှာ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်း ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့် စနစ်တကျ လုပ်ကိုင်တာဟာ ကိုယ့်အတွက်လည်း အဆင်ပြေတယ်။ ဝန်ထမ်းအနေဖြင့်လည်း လုပ်ကိုင်ရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အချိန်ကုန် သက်သာစေပါတယ်။ တချို့ အခွန်ရုံးတွေမှာ ဝင-၈ ကို သီးခြားစားပွဲမှာ သွားထုတ်ရတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။ မမေ့မလျော့ တောင်းခံရယူပါ။
အခွန်ဆောင်တာဟာ အမည်ပေါက် ခံယူမယ့်သူဟာ ကားဝယ်ဖို့အတွက် ပေးချေတဲ့ ငွေအတွက် ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်စေတာ ဖြစ်ပြီး တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ ဝင်ငွေအတွက် အခွန်ပေးဆောင်ထားတဲ့ အထောက်အထား ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရှိရင် အဲဒီလို ပေးဆောင်ထားတဲ့ ပမာဏကို နုတ်ပယ်ပြီး ကျန်တဲ့ ပမာဏကိုသာ ရပေါက်ရလမ်း မဖော်ပြသော ဝင်ငွေအဖြစ် ၃% ပေးဆောင်စေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အုံနာဘုတ်မှာ ပါတဲ့အမည်ကနေ အမည်ပေါက်ပြောင်းတဲ့အခါ လိပ်စာပါ ပြောင်းရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လိပ်စာပြောင်းလဲသွားတာကြောင့် နောက်ထပ် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ကုန်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အုံနာဘုတ် လိပ်စာအရ ကညန(မြင်သာ)မှာ သက်တမ်းတိုးရမှာ ဖြစ်ပြီး အမည်ပေါက်ရဲ့ လိပ်စာအရ ကညန(တောင်ဒဂုံ) ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် သက်တမ်းတိုးတာကို ကညန(မြင်သာ)မှာ အရင်ဆုံး သွားလုပ်ရင်း အမည်ပြောင်းကိုပါ တစ်ပါတည်း လုပ်ကိုင်ပါ။ အွန်လိုင်းဘွတ်ကင် လုပ်ကတည်းက ကညန(မြင်သာ)ကို လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ဝင်ငွေခွန် ဆောင်ပြီးပြီးချင်း အမည်သွားပြောင်းဖို့ မလိုပါ။ သွားပြောင်းလည်း သက်တမ်းတိုးမှ ပြောင်းဖို့ ပြောပါလိမ့်မယ်) အမည်ပြောင်းတဲ့အတွက် လိပ်စာပါ ပြောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးရင်တော့ ကညန(တောင်ဒဂုံ) မှာ သက်တမ်းတိုးကိစ္စ လုပ်ကိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် စဉ်းစားစရာတစ်ခုက အမည်ပေါက်က မန္တလေးမှာ သန်းခေါင်စာရင်းလိပ်စာ ရှိထားသူဖြစ်ပြီး ကားက ရန်ကုန်လိုင်စင်ဆိုရင် အခွန်ဆောင်တဲ့အခါ သန်းခေါင်စာရင်လိပ်စာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မန္တလေးမှ အခွန်ရုံးမှာ ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကားကတော့ ရန်ကုန်လိုင်စင် ဖြစ်နေတယ်။ အုံနာဘုတ်မှာ ပါတဲ့ လိပ်စာအရ သက်ဆိုင်ရာ ကညန မှာ သက်တမ်းတိုးရမယ်။ တကယ်လို့လား အမည်ပေါက်လိပ်စာအရ ကားလိုင်စင်ကိုပါ ပြောင်းလဲရမယ်လို့ ပြဌာန်းချက် နောင်တစ်ချိန်မှာ ထွက်လာခဲ့ရင် ရန်ကုန်လိုင်စင်ကနေ မန္တလေးလိုင်စင် ပြောင်းရလိမ့်မယ်။ ကားဈေးတန်ဖိုး အလိုလို လျော့ကျသွားမယ်။ အခု ပြဌာန်းထားခြင်း မရှိသေးသော်လည်း နောင်တစ်ချိန်မှ လိုအပ်ချက်အရ ပြဌာန်းခဲ့သော် မပြေးသော်လည်း ကန်ရာရှိ အဲဒီအချက်ကို ထည့်စဉ်းစားဖို့ကိုလည်း အကြံပြုလိုပါတယ်။
ရုံးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သည့်အခါ အခက်အခဲများ ရှိပါက ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ >> Click Here <<